NuraTrue muyedzo: yechokwadi isina waya buds ine ruzha rwakapfuma rwemitambo yemafoni - Spielpunkt - bhodhi nemitambo yemavhidhiyo
Chikamu 86%Chikamu 86%
Kubhejera, kutenderera uye mimhanzi - kune vakawanda vashandisi, zvese izvi zvave kuitika pamafoni avo mazuva ese. Mazhinji emazuva ano ekupedzisira maturusi anopa mufananidzo mhando iyo isingaite yakaderera kune yakakura kuratidza. Kazhinji kazhinji - kunyangwe nekudyidzana kwakasiyana-siyana nemakambani anonzwika - pane dambudziko neruzha panhare mbozha nhare, izvo zvisingambope chero nzvimbo yemagudzanzwi uye zvinongoenderana nemamiriro ezvinhu semiviri inonzwika zvakadaro. Mahedhifoni ndeimwe nzira. Sarudzo yakakura: wired, wireless, buds yekurembera kana plugging mukati, mabhureki, akavharwa kana kuvhurwa. The NuraTrue aiwanikwa kwatiri mu“Fool’s Gold” edition shoma.
Mazhinji maconnoisseur ane ruzha kubvira kare akaziva mhando yaanofarira nekuda kwekugara uchishandiswa kwemahedhifoni pama smartphones.Kupfuura zvese, kune vagadziri vakawanda vanogara vachirwira vatengi vane matekinoroji matsva. Nura achiri kumira kunze pakati pavo: musanganiswa wemahedhifoni uye app-based gadziriso yekunzwa kwega inzvimbo yakasarudzika yekutengesa.
Uye ikozvino Nura azviita zvakare: NaNura Chokwadi, nyanzvi yekuteerera yaunza chimwe chigadzirwa pamusika. Iyo kambani inonzwika yakapemberera kutanga kwayo nepfungwa yaive yakanyanya hunyanzvi panguva iyoyo, umo marudzi ese etekinoroji akashandiswa kugadzirisa mimhanzi yega uye pane-ruzivo kune anatomy yemuteereri. Zvakatoshanda nevaya Nura Nuraphones Pamusoro peNzeve Noise Kudzima Mahedhifoni atove nani, kunyangwe yaive yemhando yepamusoro yemahedhifoni kwete tekinoroji yaivimbisa kunakidzwa kweruzha.
Iwo mahedhifoni asina waya Nuratrue anowanikwawo mune yakaganhurwa yakakosha edition. Mufananidzo: Volkman
Nekuti mahedhifoni emahedhifoni anopa ruzha rwakapfuma asi akakodzera chete kune imwe nhanho sechigadzirwa chekubvisa, Nura agara kubvira akagadzira uye akatanga inotakurika Bluetooth plugs. Nechigadzirwa chazvino, iwe zvino wave kuda kuchikwidziridza munzira mbiri. Dhizaini yeNura Chokwadi mune yakakosha edition iri pachena uye zviri nani gimmick. Nzeve dzinouya mubhokisi regoridhe rekuchengetedza, saka dzinobata-bata zvakanyanya kupfuura vhezheni yavo nhema.
Icho chokwadi ndechekuti iyo NuraTrue - Yechokwadi Wireless Earbuds iripo mune maviri mavhezheni: yakajeka nhema vhezheni uye iyo ine ziso rinobata Bos, iyo Nura anodana "NuraTrue Fool's Gold" edition. Zita rinobva kupi? Mugadziri anopa tsananguro: Iyo diki edition yakagadzirwa pamwe chete neyemumhanzi Fool's Goridhe naDJs A-Trak naNick Catchdub, saka yakanangana nevateveri vemimhanzi kana maartist, asiwo kune vese avo vasingaonekwi. maplugs matema haaoneki. Kunyangwe iwo yero accents, mahedhivha eiyo shoma NuraTrue edition zvakare inotaridzika yakasarudzika. Hezvino zvese nezve chitarisiko uye inyaya yekuravira - tekinoroji mavhezheni maviri ari pahurefu hwakafanana.
Nura Nura Buds | Mahedhifoni echokwadi asina waya * Parizvino hapana ongororo 105,24 EUR tenga
Nenzira: iyo NuraTrue haifanirwe kuvhiringika neNuraBuds - aya zvakare echokwadi asina waya mahedhifoni ane inoshanda kudzima ruzha, asi iyo mwenje vhezheni inoshaya otomatiki, otoacoustic yekunzwa bvunzo yeyakasarudzika ruzha ruzivo. Kana iwe uchida kuita pasina iyo, unogona kuchengetedza yakatenderedza 100 euros - zvisinei, iko kugadziridzwa kweruzha ndiko hunyanzvi hwetekinoroji iyo Nura zvino inomiririra mumunda wemahedhifoni muchikamu cheumbozha.
Bhatiri: Maawa matanhatu ehupenyu hwebhatiri, kesi yekuchaja inosvika maawa makumi maviri nemana ehupenyu hwebhatiri
Kurema: 7,4 magiramu pane imwe earphone
Headphone zviyero: 25 x 25 x 22 mm
Zviyero zvebhokisi rekuchaja: 72 x 30 x 35 millimeters
Kubatanidza: Bluetooth 5.0, Bluetooth QuickSwitch
Chiyero chekuendeswa kweNuraTrue, 1x USB-A kune USB-C yekuchaja tambo, 1x yekuchaja kesi, mapaya matatu emazano enzeve muhukuru hwakasiyana uye maviri maviri emapiko emapapiro anobatika, peya imwe yemazano nzeve.
Panyaya yehutano, pane zvishoma zvekunyunyuta pamusoro pebhokisi. Iyo plugs dock zviri nyore, batisisa muzvibatiso zvadzo zvekuchaja uye chivharo chinovharawo zvakasimba - saka haungamborasikirwe neNura Chokwadi. Pazvakanakisa, munhu anogona kushoropodza chivharo chepurasitiki - bhokisi rekuchengetera rakagadzirwa nepurasitiki uye kwete yechinhu chakanyanya kugadzikana, senge aluminium, sezvazvakaita ne Epic GTW 270. Nekudaro, chikanganiso ichi chinewo zvakanaka: pasina mahedhifoni, bhokisi rakareruka zvakanyanya kupfuura imba yesimbi, saka harina huremu muhomwe yako. Chero zvazvingaitika, iyo yekuchaja kuita haina kukanganisa kusarudzwa kwezvinhu.
Kusanganisira bhokisi rekuchaja, hupenyu hwebhatiri hweNuraTrue hunogara kwemaawa makumi maviri nemana - mahedhifoni anotonga matanhatu, uye bhokisi rimwe 24. Mufananidzo: Volkman
Nekudaro, iwo echokwadi asina waya mahedhifoni "Nura Chokwadi" haasi madhiri. Iwo mahedhifoni asina waya anodhura anenge mazana maviri nemakumi matatu emaeuro, saka unofanirwa kuchera zvakadzika muhomwe yako. Asi iwe zvakare unowana yakawanda painopihwa: Active Noise Cancelling, yemagariro modhi, iyo otoacoustic yekunzwa bvunzo inozivikanwa kubva kuNura zvigadzirwa, zvinosanganisira kugadzirisa, uye wega-inogadziriswa mabhatani ekubata. Uye zvakare, pane nyaya uye tambo yekuchaja kubva ku USB-A kuenda ku USB-C (yeimba), matatu matatu e-silicone earplugs muhukuru hwakasiyana uye imwe yakawedzera peya yezvikorekedzo nzeve, iyo ine diki "hook" - a. bapiro. Uye: Iwo ekuwedzera foam plugs anosanganisirwa anoratidzawo kuti wakafunga zvakadii nezvezvinhu zvidiki. Nezvekupedzisira uye nesilicone zvakabatanidzwa, mahedhifoni anogona kugadziridzwa zvakanaka kune yemunhu anatomy yezeve. Izvi zvakakosha, nenzira, nekuti mune imwe yematanho ekutanga mushure mekubatanidza, iyo app inotarisa kana nzeve dzenzeve dzanyatsokwana sechikamu chekunzwa bvunzo.
Otoacoustic Hearing Test: Zvirinani chaizvo?
Iyo app-inodzorwa nenzeve kuyerwa, iyo iyo Nura yakakwezva kutarisa mukuwanda kwayo mushandirapamwe weiyo debut modhi, zvakare chikamu cheNuraTrue modhi. Izvo zvinonzwika zvakaoma zviri nyore - mahedhifoni anoita basa pamwe chete neNura app pasina kushanda nesimba. Kana mapulagi akagadziriswa uye akagara zvakanaka munzeve, iyo app inoyera kunzwa kwemushandisi. Girafi inozoburitsa ruzivo nezve kuyerwa kwekunzwa kwemunhu, asi vateereri havagone kuita zvakawanda nazvo. Kune rimwe divi, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti zviratidziro dzimwe nguva zvinosiyana zvakanyanya pakati pevashandisi vega - chimwe chinhu chiri kuitika. Chii chaizvo? Ndiwo "mashiripiti" aNura, haugone kunyatsonzwisisa. Zvikuru, zvisinei, ndezvekuyera otoacoustic emissions kuitira kugadzira mufananidzo weiyo inonzwika canal kuburikidza nemasaisai anonzwika. Izwi rinobuda rinobva raenderana neizvi.
Mukubatana neiyo Nura app yakabatana, iyo NuraTrue inoyera nzeve nzeve uchishandisa otoacoustic nzira. Mufananidzo: Volkman
Kunenge kupenga: Zvinonyatsoshanda. Nekudaro, kuti yakakura sei iyo wow mhedzisiro inopedzisira yakanangana nemaitiro emushandisi. Chero ani akamboshandisa emhando yepamusoro-wireless ear buds pamberi anofanira kunyatsoteerera, sezvo ivo vachigona kuona misiyano mumabass uye kujeka kunyanya. Kana iwe ukachinja kubva kune yakachipa mahedhifoni kuenda kuNura modhi, iwe unofanirwa kunakidzwa neruzha rwemhando. Kusvika papi bvunzo yekuteerera inovandudza ruzha kumagumo kwakaoma kujekesa, asi misiyano dzimwe nguva inonzwika zvakajeka, zvichienderana nekubuda kwenhau. Iwe wakanyanya kukosha mubvunzo ndewekuti: Ruzha rwemhando rwakarurama here? Mhinduro yakakosha zvakafanana: Hongu!
Inzwi: Chinhu chega
Iyo NuraTrue inopa akajeka marefu, akapfuma mabass uye akadzikama mids - zvakanyanya kushamisa, zvisinei, inyaya yekuti madiki echokwadi asina waya nzeve mabuds ane activated ruzha kudzima inonzwika senge hombe headband mahedhifoni. The technical sound performance yakakura. Uye kuisanganisa pamwe nekukwanisa kugadziridza zvimwe zveruzha hazviiti kuti zvinhu zvinyanye kuipa. Iyo bass inogona kugadziridzwa kubva pakusanzwisisika kusvika pakukwira, inonzi naNura kunyudzwa uye haingori bass boom, asi inoitirwawo kuwedzera chimwe chinhu kumafaro ekuteerera padanho remuviri. Kana uchida, iwe unogona zvakare kufananidza yako pachako ruzha chimiro neyakajairwa imwe - mutsauko wakakura. Chero zvazvingava, HiRes odhiyo harisi dambudziko kuNuratrue.Mawoko emaoko anotsigira aptX, SBC uye AAC codecs.
Chero zvazvingava, kugadzirisa bass pressure yakakosha, nokuti chokwadi kusarerekera kwezwi kunotambura nekuwedzera "kunyudzwa". Pano mushandisi anofanira kugadzirisa sarudzo maererano nekuravira kwega. Sezvineiwo, iyo NuraTrue haina kunzwika-yakarerekera, pano neapo iwe unogona kunzwa kuwedzeredza, kunyanya pakati-renji. Asi: Soft bass uye yakazara yakatsanangurwa yepakati nepamusoro toni inovimbisa ruzha rukuru. Iyo NuraTrue inonakidza uye inopenya nekuda kweiyo ANC modhi, kunyanya munzvimbo ine runyararo - ipapo unogona kunyudza iwe pachako munyika yemanzwi asina kukanganiswa uye kuvanza nharaunda yako. Kuti ruzha rwakanaka sei pakupedzisira zvinoenderana nemafomu anoridzwa kumashure: mahedhifoni anogona kuita rock uye pop zvakanakisa uye mimhanzi yekirasi inonzwikawo, kunyangwe iine zvishoma zvinokanganisa.
Maprofiles ekunzwa anogona kuchengetwa muapp - iwo anoonekwa kuyerwa mhedzisiro dzimwe nguva anosiyana zvakanyanya. Mufananidzo: Volkman
Uye mitambo? Ndipo panouya NuraTrue mune yavo. Kashoma kutamba kwenharembozha kwave kuri mumhepo maererano neruzha. Kune vatambi, Nura's wireless buds inzira chaiyo kune yakakurumbira mhando. Iwo compact plugs anounza ruzha musanganiswa wemitambo zvakanaka uye munzeve.
Chekupedzisira asi chisiri chidiki, izvi zvinokonzerwa nekukodzera kwakanaka.Iyo NuraTrue pakupedzisira yakasununguka kupfuura zvaungafunga pakutanga kuona. Iyo stereo panorama inonzwika inoshamisa, zvisinei nekuti inharembozha MMOs ine ruzha-musanganiswa-mash kana nzvimbo yakanyarara & tinya adventures kubva kuDaedalic's Edna akatevedzana.
Nura haaite zvikanganiso nematepi angave: iyo NuraTrue haina mvura maererano neIPX4, inogona zvakare kupfekwa panguva yemitambo, nguva yekuchaja ipfupi zvinofadza pamaawa maviri echokwadi isina waya mahedhifoni uye kutenderera maawa maviri nehafu yekuchaja. nyaya - nguva yekuteerera ndeyekurebesa: mabuds anotora anenge maawa matanhatu, kutsanangurwa kwemugadziri kunokwana pano. Mhosva yekuchaja zvakare inopa iyo NuraTrue nemamwe matatu ekuwedzera machaji. Izvi hazviiti kuti modhi ive yakanakisa mukirasi yayo, asi hapana chekunyunyuta pamusoro apa.
Mhedziso pabvunzo yeNuraTrue Wireless Buds
Nura's NuraTrue isina waya mu-nzeve mahedhifoni ari maoko pasi mamwe eakanakisa mahedhifoni kunze uko izvozvi. Mukupedzisira, izvi zvinokonzeresa pasuru yemidziyo yakanaka uye hunyanzvi, mukana wakakura wekuita munhu uye tekinoroji inonzwika yecompact in-ear plugs. Kugadzirisa mahedhifoni pakutanga kunogona kunzwa kusinganzwisisike uye kubata kunotora kujaira pakutanga - zvichienzaniswa neAirpods, semuenzaniso. Asi zvakakosha: paunongonzwa toni dzekutanga, unobatwa nechiitiko chekuteerera, izvo zviri nani zvakanyanya kupfuura nemamwe akawanda mamodheru.
Ehe, iwe unofanirwa kufarira maitiro eNuraTrue, ane ekunze-akaumbwa zvidimbu zvekupedzisira - asi ikoko hakusi kushaikwa kwekunyaradza. Nehunyanzvi, mapulagi anorira mumamiriro ese ezvinhu: kana uchiteerera mimhanzi, paunenge uchitenderera mafirimu uye zvakare kana uchitamba. Iyo yekupedzisira inonyanya kunakidza nekuti kusarudzwa kwemhando yepamusoro yekutamba nzeve idiki. Nekudzvanywa kweruzha kwakabatidzwa, unogona kunyura mune dzimwe nyika. Kudzimwa kweruzha hakuna kunyatso kutaurwa senge mureferensi, iyo Bose QuietComfort, asi izvi zvakanyanya kubhadharwa nekunyudzwa kunogadziriswa, iyo bass yausingangonzwa chete, asiwo kunzwa muchipfuva chako.
Paunotora zororo, unogona kumisa ANC nyore nyore nekudzvanya bhatani uye teerera zvakakukomberedza kuburikidza nemakrofoni akavakirwa-mukati uye kudzikisa vhoriyamu panguva imwe chete. Iyi "social mode" yakanakira kuita hurukuro pfupi pasina kutora mapulagi. Chero zvazvingava, kushanda kuri nyore uye kunogona kugadzirwa maererano nezvido zvako. Iwe unongofanirwa kuita zvidiki zvidiki mumhando yenharembozha, nekuti kubereka kwezwi dzimwe nguva kunyarara kune mumwe munhu.
Nguva yekumhanya yemaawa makumi maviri nemana kusanganisira kuchaja bhokisi yakakwana zvakakwana mukushandiswa kwemazuva ese, kunyangwe isiri yepamusoro kirasi. Nguva dzekuchaja ipfupi pakusvika kwemaawa maviri nehafu.
Iyo NuraTrue inokunda, kunyanya kana zvasvika kune ruzha rwemhando. Iwo mawaya-mu-nzeve buds arikugutsa muchikamu chakakosha - pamusoro pehurefu hwavo hwese. Yakadzama trebles, mabhesi akapfava uye anonyanya kuenzana mids anonakidza munzeve.
Nura NuraTrue Fools Gold Limited Edition | TrueWireless... * Parizvino hapana ongororo 229,00 EUR tenga
NuraTrue - yechokwadi isina waya mahedhifoni
pfupiso NeNuraTrue, mugadziri Nura akaisawo chiratidzo chekunhuhwirira muchikamu chewireless ear buds: yemhando yepamusoro-yemutengo ine ruzha runonakidza uye, mushure menguva yekuziva, inopa kunyaradza kwakanaka uye nyore kushandisa. Mutengo wepasi pe230 euros hausi dhiri, asi zvakanaka kupihwa mhando.
Kare Crypto mitambo: Iyo Sandbox uye Star Atlas inoita iyo hombe bang
Inotevera Embracer anotenga Square Enix masitudiyo kuseri kweTomb Raider, Deus Ex uye Mbavha
Superspreader: Skill kadhi mutambo uri chinhambwe unomhanya sekuwanda mari
Google Stadia haisati yafa: Inopfuura zana mitambo mitsva muna 100
Wing flap sedhijitari bhodhi mutambo: Shanduro yeNintendo Shandura ichaburitswa muchirimo